» ‘अब डिस्काउन्ट र क्यास ब्याक दिने, उधारो बीमा गर्ने कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का गर्छाै’
२०७८ आश्विन ३०, शनिबार १८:०२
मैले अर्थमन्त्रीसँग बीमा क्षेत्रका बारेमा कुरा गर्नका लागि समय मागिरहेको छु । उहाँले छिट्टै समय दिन्छु भन्नु भएको छ । बीमा क्षेत्रको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बीमा नीतिको हो । मुलुकको बीमा नीति खोई ? देशमा सबै क्षेत्रको नीति छ तर बीमा नीति छैन् । सरकारले बीमा क्षेत्रलाई कहाँ लैजान चाहेको हो ? कहाँ डिपार्चर गर्न चाहेको हो ? सबै भन्दा पहिले बीमालाई सरकारले बुझ्नु पर्छ । हामी त सरकार भित्रको एउटा निकाय हौं, सरकारले बीमा बुझेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारले हामीलाई राम्रोसँग काम गर्न सक्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । हामीले मन्त्रीज्यूलाई यीनै कुरा भनेका छौं, अर्काे भेटमा थप स्पष्टताका साथ कुरा राख्नेछौं ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले बीमा बजार बिगारेको भन्नु भयो, कोरोनाको पैसा किन दिन सक्नु भएन भन्नु भयो । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले पनि त्यहि भन्नु भयो । म मन्त्रीज्यू तिर हेरेर हासेँ । मन्त्रीज्यूले विस्तारै भन्नु भयो, ‘यो मैले गर्दा हो, चुप लाग्नुस् ।’ त्यसपछि कुरा मत्थर भयो । हामीले कोरोना बीमाको भुक्तानी सम्बन्धमा एउटा राय आज भोलीमै पठाउने छौं । दशैंपछि कोरोना बीमाको भुक्तानीको बाटो खुल्नेछ ।
बीमाको विषय उजार गर्नका लागि हामीले पनि आफ्ना मागहरु राम्रोसँग अघि सार्न सकेका रहेनछौं । समितिले बीमा बजार विस्तारको जिम्मा कम्पनीहरुलाई दिने अनि कम्पनीहरुले बजार बीमाबारे जानाकरी बढाउने जिम्मा बीमा समितिको हो भनेर बस्ने अवस्था बनिरह्यो । हामी दुबै पक्ष ‘डिलेमा’मा बसेकाले आफ्नो गन्तव्य कहाँ हो ? र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेबारे हामी अनभिज्ञ बनेका हौं । अब यसलाई चिरेर मिलेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।
बीमाको सचेतनाको जिम्मा कसको हो ? कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुले बीमा सचेतना बढाउने कम्पनीको कार्यक्रम के के हो ? कहिले कहिले ल्याउनुहुन्छ र कहाँ कहाँ जानु हुन्छ भनेर एउटा योजना नै बनाएर समितिमा बुझाउनु होला । बीमा सचेतनाका लागि योजना नै बनाएर पेश गर्नुस, बीमा समिति आफैले पनि केहि गर्छ ।
अहिले हाम्रो पहुँच भनेको २७ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले अब ३३ प्रतिशत बनाउने बारे जिम्मा लिनु पर्दैन् ? खाली बीमा समितिको जिम्मा लगाएर मात्रै हुन्छ ? बीमा समितिमा न स्किल छ, न टेक्नोलोजी छ न संस्थागत सुशासन छ ? यी विषयमा मन्त्रालयले सहयोग गर्नु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । बीमा समितिले पोलिसी बनाईरहेको पनि देखियो, पोलिसी त सरकारले बनाउनु पर्ने हो ।
मैले बीमा समितिमा आएर यति धेरै पत्र पठाएछु की मलाई नै थाहा छैन्, के के विषयमा पत्र पठाएछु भन्ने । अब पत्र पठाउने काम बन्द हुन्छ । यस अघि बठाईएका पत्रहरुको कार्यान्वयन हेर्छौ । अहिले पनि उधारो बीमा कायमै छ, क्यास ब्याक पनि जारी रहेछ । डिस्काउन्ट पनि कायमै रहेछ । अब एक दुई वटा कम्पनीको एक दुई वटा कारोबार रोक्का गरेर हेर्छाै । केहि महिनापछि मात्रै खुला गरिदिन्छौं ।
(दशैं शुभकामना कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य सिलवालले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)